Nezvedu - Fujian Shengyang Mapaipi Technology Co, Ltd.
Fujian Shengyang Mapaipi Technology Co, Ltd.
Fujian Shengyang Pipeline Technology Co, Ltd. yakavambwa muna 2007. Iyo iri muFuzhou Yuanhong Investment Zone muFujian, padhuze neFuzhou Changle International Airport. Inongova maminetsi makumi mana kubva kuPingtan Comprehensive Experimental Reform Zone, uye ine yakasarudzika nzvimbo yenzvimbo. Iyo kambani ine yakanyoreswa capital yemamiriyoni e10.88 yuan. Kubva kune diki-diki yekugadzira fekitori, yakagadzira kuita yenyika yepamusoro-tech bhizinesi rinotungamira mukugadzirwa kwepombi dzepurasitiki. Muna 2011, kambani yakavamba kugadzirwa chawo munzvimbo yekumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kwenharaunda yeChangming Economic Development Zone kuGuizhou, uye ndokusimbisa Guizhou Shengyang Pipeline Technology Co, Ltd. panguva imwechete muBeijing, Shanghai, Guangzhou, Kunming, Changsha, Xi ' an, Chongqing, Jiangxi nemamwe mapurovhinzi makuru nemaguta ekumisikidza matavi nemahofisi, maratidziro ekutengesa nyika yese.
Mushure memakore ekuenderera mberi kwekuvandudza uye hunyanzvi, icho chigadzirwa chinoteedzana chakazara, ichifukidza nyowani epurasitiki pombi dzakateedzana senge PE / PP / PVC mvura yekupa, drainage, gasi, kuchera, makemikari, matunhu eruzhinji, uye magetsi. Iyo yakapetwa bhandi simbi yakasimbiswa yakakomberedzwa pombi ine yakazara yakatarwa, uye chigadzirwa kuita kune zvese zvakanakira simbi nepurasitiki. Iyo yakanyanya dhayamita yeHDPE yemvura pombi yekugadzira inogona kusvika Ф1200, iyo yakanyanya dhayamita yemadhiraini uye sewage system inosvika yemukati dhayamita Ф2400, uye pombi fittings zvakakwana.
Shengyang Mapaipi anotora hunyanzvi hwechigadzirwa tekinoroji uye kunyorera senheyo yekambani. Iyo inogara ichienderana neepamberi tekinoroji yekunze epurasitiki mapaipi, uye inotora kuvandudza uye kushandiswa kweye nyowani yemakemikari ekuvakisa zvinhu seinotungamira nzira yeindasitiri Pinza tekinoroji yepamusoro uye uvandudze kukwikwidza kwemusika kwebhizinesi rese. Iyo kambani yapfuura ISO9001, ISO14001, OHS18001 certification uye China chigadzirwa kwezvakatipoteredza chitaridzi chitupa. Muna 2018, yakapihwa iyo "yepamusoro mazana mashanu echiChinese" uye chibvumirano chezvematunhu-chinokudza uye chakavimbika chikwata. Shengyang Lab yakave yakagamuchirwa neChina National Accreditation Service yeConformity Ongororo.
Kubva payakamisikidzwa, Fujian Shengyang Pipeline Technology Co, Ltd. inonamatira kune bhizinesi uzivi hwekutora mhando senheyo, vatengi senhare, hunyanzvi semweya, uye chinangwa chekugadzira kukosha kwevatengi. Inoenderera nekuvandudza manejimendi manejimendi ebhizinesi, iine pekutanga nyowani, kumhanya kwakanyanya, basa riri nani mukutaridzika kutsva kwesango rebhizinesi.